Golaha Wasiirrada oo dooday nidaam maaliyeed ay diyaarisay wasaaradda Maaliyadda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha Wasiirrada oo dooday nidaam maaliyeed ay diyaarisay wasaaradda Maaliyadda
Mareeg.com: Shir aan caadiga aheyn oo ay golaha wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya maanta isugu yimaaddeen oo uu shir guddoominayey Ra’iisul wasaare ku xigeenka Xukuumadda, Maxamed Cumar Carte, ayaa si gaar ah looga hadlay arrimaha Maaliyadda dalka, iyadoo wasaaradda Maaliyaddu golaha horkeentay nidaam maamliyadeed oo casri ah oo ay ku shaqeyso.
Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Aadan Ibraahim, oo shir jaraa’id qabtay shirkaasi kaddib, ayaa sheegay in golaha wasiirrada ay dood dheer ka yeesheen nidaamka ugu wanaagsan ee ay Wasaaraddiisu ku shaqeyso, isagoo tilmaamay in golaha wasiirrada ay u gudbiyeen sida loo maamulayo dakhliga dowladda iyo qarashaadka la bixiyo, iyadoo loo adeegsanayo hab cusub oo casri ah, si raad-raac ay u lahaayaan dhammaan lacaga baxa ama soo gala dalka.
“Marka maanta Ajendaha aan ka hadalnay waa daahfurnaan maamulka Maaliyadda oo ah mid aan dadku fahamba ka heysanin qaabka ay dowladdu u aruuriso dakhliga iyo qaabka ay u kaharasha gareyso” ayuu yiri wasiirka Maaliyadda.
Dhanka kale wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya, ayaa sheegay in laga dooday Miisaaniyadda 2015-ka ee dowladda, maadaama ay soo baxeen caqabado u baahan in wax laga qabto.
Wuxuu sheegay in golaha wasiirrada ay u gudbiyeen tallo soo jeedin ka timid wasaaradda Maaliyadda, taas oo ku aaddan dakhli kordhinta dowladda, isla markaana lala xisaabtamo wasaaradaha kale ee Xukuumadda.
“Waxaa kaloo maanta laga dooday Miisaaniyadda 2015-ka, waxaad la socotaan in aanan la bixin mushaaraadka dowladda, dakhliga dowladda 50%, gudaha ayaa laga helayey, dowladda kuwaas ayey ku shaqeyneysaa lacagihii dibedda weli lama helin, golaha wasiirrada waxaan u gudbinnay sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa, waana tallo soo jeedin wasaaradda Maaliyadda ka timid, iyadoo wasaarad walba lagula xisaabtamayo Dakhliga soo gala” ayuu yiri mark kale.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Maxamed Aadan Ibraahim, ayaa sheegay in lagu heshiiyey dib ugu laabashada heshiiyada ay Xukuumadda la gashay hey’adaha caalamka qaarkood, isagoo intaa raaciyey in nidaamka lagu shaqeynayo uu yahay mid la jaan-qaadaya waqtiga, waxa uuna shacabka kula dardaarmay in ay Xukuumadda la xisaabtami karaan.
“Ugu dambeyn, waxaa lagu heshiiyey dowladda waxa ay gashay heshiiyo badan, meeshaasna shacabka looga qaado qidmad, waxaa la isla gartay in dib u eegis lagu sameeyo arrimahaasi” ayuu yiri wasriiku.
Xukuumadaha Soomaaliya ayaa afka ka sheega iney hagaajinayaan nidaamka maaliyaeed ee dalka, hase ahaatee waxey keeni la’yihiin wax ay ku qancaan dalalka dowladda taageera iyo shacabka Soomaaliyeed ay xukuumaddi canshuurta ka qaaddo.